I-Jacuzzi e-inflatable - Uyazazi zonke izinzuzo zayo ezinkulu? | Bezzia
I-Jacuzzi e-inflatable: Uyazazi izinzuzo zayo ezinkulu
USusana godoy | 07/04/2021 16:00 | Ikhaya
Ukuba ne-jacuzzi inflatable kungenye yezindlela ezingcono kakhulu ekhaya lethu futhi, ngensimu yethu. Uma sinendawo ezinhlangothini zombili, sekuyisikhathi sokucabanga ukuthi singayihlobisa kanjani nokuthi iyiphi indlela engcono kunokukwenza ngomqondo wokuthi sizokuphakamisa namuhla nokuthi uzokuthanda nakanjani.
Ngoba ukuba ne-jacuzzi kuyiphupho elikhulu labaningi. Kepha hhayi kuphela ukusho ukuthi sinayo, kepha ngoba inenzuzo enkulu okufanele siyicabangele. Kungale ndlela kuphela, lapho uzosusa khona ukungabaza kokuthi uyasithenga noma cha, kepha sesivele sikutshela ukuthi isinqumo sizoba sihle kakhulu kuwe nakuwo wonke umndeni. Thola!
1 Yivalelise ukucindezela ngenxa ye-jacuzzi engenawo amandla
2 Uzokhulula izinhlungu zemisipha
3 Ungayihlanganisa noma uyihlukanise noma nini lapho ufuna khona
4 Ukubukeka kwesikhumba kuzothuthuka
5 Ukwelashwa okukhethekile kwe-arthritis
Yivalelise ukucindezela ngenxa ye-jacuzzi engenawo amandla
Kokubili i-jacuzzi ne-spa, kunguhlobo lwechibi elinamabhulebhu ayelaphayo. Ngakho-ke enye yezinzuzo zokuqala zazo ukuthi inganciphisa kakhulu ukucindezeleka kwakho. Impela alukho usuku lapho ungaphumula ngokugcwele. Lokhu kwenza umzimba uhlale ushuba ngenxa yomsebenzi, ikhaya nezinye izinkinga eziningi. Ngakho-ke, ukugeza phakathi kwamabhamuza kuzokhulula zonke lezo zingxenye ezinenkontileka futhi uzobona ukukhululeka okukhulu okuza ngokushiya ukungezwani okungaka ngemuva. Usuzamile okwamanje?
Uzokhulula izinhlungu zemisipha
Ngaphambi kokuthi sisho ukucindezeleka futhi manje kukhona okuhlobene nezinga elithile. Ngoba ubuhlungu futhi bungaba uchungechunge lwezinkinga ezingeziwe. Ikakhulukazi uma inemisipha, uzothola impilo nge-jacuzzi e-inflatable. Ngoba ngalokhu kuzoba yi-jets ngayinye ephuma kuyo enakho konke ukuvelela. Impela lokho ngokwenza kusebenze ukusakazwa, kuzokhulula indawo futhi kulimaze kancane kunokuba sicabanga. Le yingxenye yenhlanganisela yamanzi afudumele namajethi asebenzayo. Ngakho-ke ukuba yimizuzu embalwa usuku ngalunye, sizobona ngokushesha ukuvela kwalezi zinhlungu.
Ungayihlanganisa noma uyihlukanise noma nini lapho ufuna khona
Yikho okuhle ngayo yonke into engahlanganiswa futhi ihlukaniswe, ngakho-ke kulokhu akusalanga ngemuva. Mhlawumbe entwasahlobo noma ehlobo isikhathi kuyalulekwa ngaso sonke isikhathi ukucabanga ngokukufaka ngaphandle, ngenkathi kusebusika, ungayiqaqa kuze kufike esinye isaziso. Ngokwalokho esingakusho ukuthi kuyinto ephathekayo futhi eyenza ukuthi ibe nokuguquguquka okuningi, njengoba siyithanda. Ngakho-ke, kungenye yamaphuzu afanele ukubhekelwa.
Ukubukeka kwesikhumba kuzothuthuka
Ngoba akuzona zonke izinzuzo ezazizogxila kokungaphakathi kwethu, kepha futhi zingabonakala ngaphandle. Lokhu kusho ukuthi yisikhumba esinokuningi ukusho. Ngakolunye uhlangothi izobukeka inamanzi amaningi. Okuzokwenza ibukeke ibushelelezi futhi ingenamibimbi mahhala ngasikhathi sinye. Ngakho-ke, ngokuqinisekile ngeke ukwazi ukumelana nokuthenga i-jacuzzi engafuthwa ukwazi ukuthi impilo yakho ayizothuthuka kuphela, kepha konke lokhu kuzobonakala ngaphandle.
Ukwelashwa okukhethekile kwe-arthritis
Iqiniso ukuthi abanye izifo ezifana nohlobo lwamathamboAbanakho ukwelashwa okunembe kakhulu. Okusho ukuthi, kuzofanele siphile nabo isikhathi eside. Kepha njalo kufanele ukhethe izinketho ezithile ezilula ukuze ukwazi ukuzinciphisa. Kungakho sikhuluma ngeJacuzzi. Inhlanganisela yamanzi nokushisa ukukhuthaza izinkinga ezithile zempilo, njengoba sibona. Kuyiqiniso ukuthi izifo ezingamahlalakhona zizoqhubeka nokuqubuka kepha empeleni futhi ngenxa yalesi sinyathelo, sizothuthuka futhi siqaphele ukuvela okuhle.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ikhaya » I-Jacuzzi e-inflatable: Uyazazi izinzuzo zayo ezinkulu
I-Uterqüe yethula i-A la Fresca, indlu yayo entsha yokushicilela ye-SS21
Ukukhishwa kwamafutha kuyisihluthulelo sokwenza izinwele zakho zikhule ngokushesha